Macluumaadka ku jira boggan midabka ah waxaa ka mid ah sharraxaadda qeexitaannada guud ee farsamada iyo qaabeynta nidaamka, iyo sidoo kale sharaxaada qaabeynta iyo qaabeynta xulashada, mana dammaanad ka qaadayno in qaabeynta xulashada lagu dari doono wax soo saar kasta oo alaab ah;
Degdeg ah saarid
Soo saar 8 shaybaarkii markiiba, Waqtiga soo saarida ugu dhaqsiyaha badan waa 10 daqiiqo.
Cabirka la hagaajiyay iyo dejinta soo noqnoqda iyo lysis heerkulka qolka ayaa baabi'inaya suurtagalnimada soo saarista aerosol.
Ammaan ah iyo lagu kalsoonaan karo
Laydhka ULTRAVIOLET ee ku dhex jira ayaa meesha ka saaraya wasakhaynta aaladda asiidhka nukliyeerka. Si otomaatig ah, hawlgal xidhan, oo leh alaab la iska tuuri karo, ayaa si weyn u yaraynaya halista reagentyada kiimikada iyo jeermiska cudurada keena ee waxyeelada u geysanaya hawlwadeenka.
Si fudud ku shaqeeyaan
Barnaamijka qaab-dhismeedka lagu dhisay, hal guji bilow, hufan oo ku habboon.
Soosaarida Mini Automatic nucleic acid
Habka bar magnet Mug muunad ah 20 ~ 200 μL
Tirada bar magnet 8 Soosaarka muunada 1 ~ 8
Soo kabashada kuul magnetic ＞ 95% Reagents la isticmaali karo
8 - safka magnetic, 96 godka saxanka godka qoto dheer kit Qalabka soo saarista nukliyeerka beedka magnetic bead
10 nuqul / mL leexashada-godka CV ≤ 5%
Xakamaynta heerkulka RT ~ 99 ℃ ， ± 1 ℃
Waqtiga ay shaqeynayaan
15 ~ 30 daqiiqo / waqti
Xakamaynta wasakhda Jeermiska uk
Isku darid naxdin leh
Saddex gear si aad ula qabsato
Interface hawlgalka Labada Shiine iyo Ingiriisiba, 7 inch taabashada shaashadda, hal guji si aad u bilowdo Maareynta barnaamijka Template qeexitaanka xorriyadda, wuxuu kaydin karaa 999 nidaamyo caadadeed
AC 110 ~ 240 V ， 50 Hz ， 60 W Jawiga shaqada 10 ~ 40 ℃, ＜ 80% RH
Aragti (L * W * H) 250 mm * 200 mm * 205 mm Qalabka miisaanka saafiga ah 5.0 Kg
Nidaamka isku dhafka PortLab-3000 （CHK-800 ， UF-300）
Macluumaadka ku jira boggan midabka ah waxaa ka mid ah sharraxaadda qeexitaannada guud ee farsamada iyo qaabeynta nidaamka, iyo sidoo kale sharaxaada qaabeynta iyo qaabeynta xulashada, mana dammaanad ka qaadayno in qaabeynta xulashada lagu dari doono wax soo saar kasta oo alaab ah; Longline Medical waxay xaq u leedahay inay wax ka bedesho qeexida wax soo saarka iyo / ama joojinta wax soo saarka alaab kasta waqti kasta ogeysiis la'aan mana noqon doonto mid mas'uul ka ah cawaaqib xumada ka dhalan karta adeegsiga warqadan midabka ah Fadlan tixraac tilmaamaha kahortagga ama taxaddarka
Hore: CHK-16A Nidaamka Soo saarida Acid Nucleic otomaatig ah
Xiga: MA-688 Nidaamka PCR-waqtiga dhabta ah